Uzo mkpirisi keyboard iji opekata mpe na Windows | Akụkọ akụrụngwa
Nke mbụ, anyị ga-achọ ịkwado ka gị na ndị enyi ole na ole na-eji kọmputa Windows arụ ụka, onye ị ga-ajụ ajụjụ dị mfe: Kedu ụzọ mkpirisi keyboard ị na-ejikarị eme ihe?
Otu ajụjụ a nwere ike ịbụ na ọtụtụ mmadụ jụrụ naanị ya yana kwa, mgbe gị na ndị enyi gị na-ekwu okwu ma na-emekọrịta ihe. Azịza kachasị dị na mkpirisi keyboard ahụ gụnyere idetuo, mado, megharia ma obu hichapụ ederede ederede na ma eleghị anya, anyị na-ejikwa ya na nhazi ihe okwu. Ọnọdụ a bụ n'ihi omume anyị na-ebu kwa ụbọchị, nke na-ahapụ obere ụzọ mkpirisi keyboard ndị dịkwa mkpa yana na agbanyeghị, anyị amatachaghị. N'isiokwu a, anyị ga-anwa ịkpọtụ aha na mkpirisi keyboard obere ụzọ 10 site na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ na gburugburu Windows dị iche iche, nke a dị ka ibe ya nke kachasị mee nke anyị mesoro na mbụ.
Kedu ihe bụ mkpirisi ụzọ mkpirisi keyboard eji arụ ọrụ na Windows
Ọfọn, ọ bụrụ na ichefu ihe anyị kwuru na paragraf bu ụzọ, anyị kwesịrị ịgwa gị na ọkeyboardzọ mkpirisi igodo kachasị eji site na onye ọ bụla bụ:
CTRL + C ka idetuo
CTRL + V iji kpoo
CTRL + X ka ihichapụ ma ọ bụ bugharịa
N'ihe atụ ndị anyị tụrụ aro na mbụ, anyị ejirila isi njikwa, nwee aghụghọ ole na ole ndị ọzọ anyị nwere ike iji igodo Mgbanwe, nke ga-abụ ihe kpatara edemede a n'ọtụtụ ụzọ mkpirisi keyboard anyị ga-ekwu.
1. Mgbanwe - Igodo igodo
Ọ bụ mmadụ ole na ole maara banyere ya, mana mgbe ị na-eme njikọta igodo a tụrụ aro na nhazi okwu na Windows, anyị nwere ike ịhọrọ ọtụtụ ahịrịokwu na ọbụlagodi paragraf; ọ bụrụ nchikota a anyị gbakwunye na igodo Control Anyị ga-enwe mmasị na nhọpụta ahụ sitere n'okwu gaa n'okwu.
Ọ bụrụ na anyị họrọ ngwa mepere emepe (ma ọ bụ, windo nyocha faịlụ) ma mee nchikota a, ọ ga-emechi. Nke a bara uru na nsụgharị Windows niile na ọbụlagodi na interface nke Modern Windows 8 Ngwa.
3. Mgbanwe + F7
Ọ bụrụ na anyị họrọ otu okwu na nhazi okwu ma mee nchikota a, thesaurus ga-apụta na aka nri nke ihuenyo ahụ na akpaghị aka.
4. CTRL + Mgbanwe + T
Ọ bụrụ na anyị nọ na ihe nchọgharị Internetntanetị na anyị nwere ọtụtụ taabụ na-emeghe, ụdị nke keyboard ụzọ mkpirisi Ọ ga-enyere anyị aka nke ukwuu ma ọ bụrụ na anyị emechie nke ọ bụla n'ime ha. Ozugbo anyị mere nchikota a, taabụ ndị anyị mechiri na mbụ ga-emeghe na-akpaghị aka.
5. Mmeri + L
Nke a bụ otu n'ime ụzọ mkpirisi keyboard kachasị ewu ewu taa, ọ bụ ezie na ọtụtụ na-echefu iji ya n'agbanyeghị na ha maara na ọ ga-enyere ha aka ịkwụsị kọmputa ahụ nwa oge.
6. Mmeri + M
Site n'iji njiko igodo a, na-akpaghị aka A ga-ebelata windo ngwa niile nke na-arụ ọrụ n'oge ahụ. Nwekwara ike ịhọrọ iji bọtịnụ obere akụkụ nwere akụkụ akụkụ anọ dị n'akụkụ aka nri ala, nke a na Windows 7 na desktọọpụ Windows 8.
7. Mgbanwe + Spacebar
Maka ndị na-eji Microsoft Excel ma chọọ ịme nhọta ahịrị kwụ ọtọ, ha nwere ike iji ụzọ mkpirisi keyboard a.
8. Alt + Igodo aka ekpe
Iji ojiji nke ụzọ mkpirisi keyboard a yiri nke ịpị akụ nke na-egosi aka ekpe nke ihe nchọgharị Internetntanetị, ya bụ, ịlaghachi na peeji gara aga na igodo anyị.
Typedị ụzọ mkpirisi keyboard ejirila kemgbe ụdị Windows ndị gara aga ma ga - enyere anyị aka chekwaa otu adreesị (ibe weebụ) n'ime listi ibe edokọbara ihe nchọgharị.
10. CTRL + Mgbanwe + B / O
Ndị a ghọrọ ụzọ mkpirisi keyboard dị iche iche mana ha mezuru otu ọrụ ahụ na ihe nchọgharị differentntanetị dị iche iche. Ọ bụrụ na (B) anyị ga-eji ya maka Mozilla Firefox na nke abụọ (O) maka Google Chrome. Site n'iji nchikota igodo a anyị ga-emeghe windo na ndepụta nke ibe edokọbara na anyi zoputara na mbu.
N'isiokwu na-esonụ anyị ga-ekwupụta ole na ole ụzọ mkpirisi keyboard nke a na-ahụta dị ka nke kacha nta eji Windows, nke nwekwara ike ịmasị ọtụtụ mmadụ mgbe ha na ha na-arụ ọrụ na mpaghara dị iche iche nke sistemụ arụmọrụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » You ma ihe bụ ụzọ mkpirisi mkpirisi igodo iri na Windows?
8 ndị ọzọ na Office Office iji jiri n'efu